Dhibbee vaayiirasii Iboollaa (EVD) yokkin ho'aa Iboollaa Hemmoorihajjikii(EHF) dhibbee ilma nammaa Vaayirasii Iboollaa dhaan dhuffuu dha.
Malatton dhukkibichaa kan mul'aachuu jalqabuu guyyaa lama hanga toorban saddi (3) erga vaayiirasichaan qabamanni booda dha.
Malatoon issas Hoo'aa qaamaa, dhukkuba qoonqoo, dhukkuba laffe, fi dhukkuba mattaa dha. Irra caallaatti immo dhukkuba garaa, hooqissa fi garraa kaassaa dabalattaanis, hojji tirruu fi kale hir'isa.Yeroo kana, nammoonni tookko tookko rakkina dhiigguu qabbaattu.
Vaayiirasiichi kan nama qabattuu wallitti dhuuffenya dhiigaa yookkin dhangalaa'aa qaamaa bineensoota Vaayirasiichaan qabbaman dha (yerro baay'ee qamaleewaan yookkin simbira haalkannitini. Manca'insii qillenssaan umamuu nannoo umammaa kesati hin galmoofnee. Siinbiiriii haalkanni otto hindhibamiin vaayiirasichaa baachuufi dabarsu akka danda'aan ni amanama.
Namni dhukkubichaan qabamee, nama birratii darbarsuu danda'aa.
Dhirri dhukubicha irra fayye sanyii issatin hanga ji'aa lamatti nama biraati dabarsuu danda'aa.
Dhuukubicha adda baasuf,dhukkubooni mallatoo walfakaatuu qabaan kan akka Buussaa, kooleraa fi kanbirraa ho'aa vaayiirasi Hemmoorihajjikin adda bahaaniruu.
Dhuukubicha mirkaneesuuf fakeenyii dhigaa qaamoota alagaa vaayirasiidhaan dhufan Rriboo nukilik asidi iboo Nukilik Asiidii, yookkin vaayiirassin mattaa isaa ni qooratama.
Of eganoon dadarba dhuukibichaa, qamaleewan fi boyyeewan dhiibaman irra akka ilma namaati hindarbinnee ittisu dabala. Kuunis kan goodhamuu danda'uu, bineyyi dhiibichaan qabamaan ajeesuufi qaama issani akkataan gatuu dhaanii.Foon siiritii bisheesuu fi yeroo foon tuqaan uffata oof eeganoo kaawwachuunis nigargaara.Yemmuu nama dhibamee wajjin jiran, uffata oof eeganoo kaawwachuni fi harka dhiqaachuubarbaachisaa dha.
Fakeenyii dhangala'aa qaamaa fi tishuulee nama dhiibamee oof eganoo gudadhaan qabamuu qabu.
Dhuukuubichaaf yaaliin kana jedhamuu hinjiru;tattaafin namoota dhibaman gargaaruf godhamaa jirran walaansaa dhangala'aa qaamaa deebisuu (bishaan dhugaati ashaboo fi suukaara xiinno qabuu) yookkiin dhangalaa'aa veenii dhaan keennu dha.
Dhuukuubichii yerro bay'ee nama ajjesa: namoota dhibichaan qabamaan keesaa baay'iinaan gidduu 50% fi 90% ni du'uu.. Oromoon rasasa wayyanen dhummaa jiru dabalatan dhukuba kanan akka hin midhamneef of egannoo goochuu qaba. Ogeesoon fayyaa ijoolee Oromoo ilee saba isaani Habashannoon ajeessa jiran kana dhukubi ilee akka hin hubneef cimmaan tajajilma fayya Oromoof keenuu qabu.